Case + Plastic holster ngoba BlackBerry 9360 / 9370 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Case + Plastic holster ngoba BlackBerry 9360 / 9370 Curve
2 1. Njengoba iklanyelwe ukuvikela smartphone yakho kuzo zonke izinhlangothi. Izingxenye ahlotshiswe in besenze nesitayela esifanako kanye ngokuphelele bavumelane nomunye. Esiwusizo, eziqinile futhi isikhathi eside.
Case Plastic + holster ngoba BlackBerry 9360 / 9370 Curve kakhulu thembeke ukuvikela BlackBerry yakho kusuka uhlevane, imihuzuko, nemihuzuko, ukungcola, kanye nokunikeza ukusetshenziswa ntofontofo. Isesekeli "2 in 1": ungakwazi uzigqoka ngokwehlukana (njengoba cover-cover) noma isethi ephelele (by ukubanjwa holster). Uma usebenzisa isihloko njengendlela cover ukufinyelela isikrini bese zekhibhodi elisavulekele, futhi kukhona amathuba zonke izimbobo. Ukuze kwandiswe izinga lokuvikeleka kanye ukuvimbela ukuwa ngengozi idivayisi, ungakwazi uxhume holster — smartphone yakho izovalwa bevela kuzo zonke izinhlangothi.
Buhle sobala kwekhithi nomklamo walo: holster senziwa ngendlela efana ulinamathisela ngaphandle kokukhipha ikhava-lid; uxhume holster akanayo yini ukuba uvule phansi, futhi ugcine: kwanele ukubeka smartphone zibe phezulu holster bese uphonsa phansi (ngocingo "esebiza" in the holster). Ngenxa kit design, ungakwazi ngokushesha futhi sizikhandle ushintshele ku Imodi omunye komunye ukusetshenziswa, ngaphandle kokwesaba kokulimaza ifoni.
Case Plastic + holster ngoba BlackBerry 9360 / 9370 Curve has a ukubukeka sibukeka has a nice matte ukuthungwa futhi "ribbed" surface evimbela ukubukeka iminwe nezehlukaniso ehlukahlukene. Isethi senziwa isitayela efanayo ngo nombala.
Case + Plastic holster ngoba BlackBerry 9360 / 9370 Curve, black 9360CASEWHL ●